Kuchenjerera uye kuisa pfungwa - Kuongorora | Kudzidziswa Kwekuziva
Nome: Kutarisirwa uye kushushwa
Autori: Holy Zvakare
Rinosunungurwa gore: 2000, 2013
Nzvimbo dzinorapwa: kutarisa uye mabasa makuru (bvunzo uye kudzidziswa)
Zera renji: 6 - 96 makore
'Kutarisirwa uye kushushwa'chirongwa chakagadzirirwa kuongorora uye kudzidzisa zvakasiyana cherechedzoekunyanya kuramba wakachengetedzwa, kusarudza kutarisisa, vakakamurwa kuteerera, pfupi-pfupi ndangariro, kushanda ndangariro e chinovhiringidza.
Yese yakazara komputa (inosanganisira CD-ROM uye idiki diki dhuku) uye ine zvikamu zviviri: imwe ye bvunzo uye imwe ye kudzidziswa, yakafanana kune imwe neimwe, zvichibva pane muyenzaniso wevanhu makumi masere nemasere vanhu vanoenda kubva pamakore matanhatu kusvika makumi masere nemasere emakore.
iwo ma calibration akapatsanurwa kuita matatu nhanho dzinoenderana nemapoka ezera iwo akatarisana nawo:
Chikamu chekutanga. 6 - 9 makore uye 65 - 96 makore ezera
Chikamu chekutanga. 10 - 18 zera
Chikamu chekutanga. 19 - makumi matanhatu emakore ekuberekwa.
Kune yega yega bvunzo kana chikamu chekudzidzira chakaitwa, chirongwa chinodzoka chinosanganisira nguva yepakati, huwandu hwezvikanganiso uye hwakasiiwa.
Pazasi isu tinotsanangura chete chimiro chebhatiri rekuedza nekuti mapurogiramu ekudzidziswa akafanana nemiyedzo imwechete.
Muedzo uye maitiro ekudzidzira
Yakajairika yakasvinwa bvunzo umo, kana chinoonekwa chinokurudzira, iwe unofanirwa kudzvanya bhatani nekukurumidza sezvazvinogona
Kukurumidza uye kurongeka
Tambo yenhamba inoonekwa pane yekutarisa (kubva pa1 kusvika pa6) iyo, nguva nenguva, imwe inovhenekesa masekondi mashoma mushure meimwe. Basa remusoro wenyaya iri kudzvanya nekukurumidza sezvinobvira iyo nhamba inoenderana neiyo yakavhenekerwa pachiratidziri.
Kusarudzwa uye kusungwa
Iyi bvunzo inoumbwa maviri Sub-bvunzo:
a) Kuzivikanwa kwekuongorora. Nyaya yacho, ichiteerera mutsara wetsamba dzinotaurwa nezwi rakanyorwa, rinofanira kukurumidza kubaya bhatani pese parinodudzwa izwi rechinangwa.
b) Kuzivikanwa kunoonekwa. Iye chidzidzo anoona akateedzana emifananidzo achioneka, imwe mushure meimwe. Pese panowoneka mufananidzo wechinangwa, anofanirwa kukurumidza kubaya bhatani.
c) Kuzivikanwa kwepasirese. Iyo matrix ine magadzirirwo akasiyana anoonekwa pane iyo yekutarisisa; kutanga kubva kumusoro kuruboshwe kudhirowa, chisheji chinosimudzira rimwe dhizaini panguva, kupepeta kurudyi. Basa racho kukurumidza kupusha kiyi nguva imwe neimwe kana kodhi inosimudza imwe yechinangwa.
Iyi bvunzo ine miedzo miviri yakafanana nedhijitari span iripo BVN 12-18:
a) Direct kudzokorora kwehuwandu. Kuenzana kwemadhijiti kunoonekwa pane yekutarisa (imwe digit inoonekwa panguva). Basa remusoro wenyaya nderekuzviburitsa zvakare nekutaipa chaiyo kurongeka kwechitarisiko chenhamba dzakaenzana.
b) Revers kudzokorora kweye manhamba. Kuenzana kwemadhijiti kunoonekwa pane yekutarisa (imwe digit inoonekwa panguva). Basa remusoro wenyaya nderekuzviburitsa zvakare nekutaipa reti yekudzora kwechitarisiko chenhamba dzakaenzana.
Iyo yakateedzana yekuongorora uye yekuona zvinokurudzirwa zvinoratidzwa panguva imwe chete. Basa rechidzidzo ndere kukurumidza kudzvanya kiyi kana chifananidzo chikaonekwa uye nekukurumidza kudzvanya imwe kiyi kana uchinzwa izwi rakanangwa.
Iyi miedzo miviri inoenderana neStroop test paradigm:
a) ruvara. mazwi anooneka anoratidza mashanu anogona kuve mavara, eeruvara rumwe anoratidzwa neshoko (semuenzaniso, izwi rekuti "tsvuku" rakatsvuka). Chinyorwa chinofanirwa kubaya makiyi anoenderana nemuvara wega wega unoratidzwa neshoko rega rega nekukurumidza sezvazvinogona.
b) chipingaidzo. Panguva ino mazwi anogona kunyorwa neruvara rwakasiyana nguva dzese, zvisinei nezvinoreva izwi iro pacharo (semuenzaniso, "tsvuku" rinogona kunyorwa neritema). Chinyorwa chinofanirwa kubaya makiyi anoenderana nemuvara unonyorwa izwi nguva dzese (semuenzaniso, kana izwi rekuti "tsvuku" rakanyorwa nerima, ipapo kiyi inoenderana nechitema inofanira kudzvanywa).
Aya bvunzo dzinoverengeka dzakafanana neakakurumbira 'Ekuterera Matrices Bvunzo':
a) nhaurwa. Musoro unoratidzwa mavara matatu; rake basa nderekusarudza ivo vese, nekukurumidza sezvazvinogona, mukati me matrix ine vanovhiringidza.
b) zvekuona nemeso. Basa rakafanana nerekare asi nezviratidzo zvisinganzwisisike panzvimbo pemabhii.
'Kutarisirwa uye kushushwa'bhatiri rekuyedza ine isina chokwadi kukosha kwekuve nyore kubata sezvo inenge yakazara zvachose mota.
Inosanganisira yakakura nhamba yemabasa nechinangwa chekuferefeta zvakawanda zvinotarisisa zvikamu izvo zvinowanzopunzirwa nemamwe mabhatiri.
Sezvazvinoitika pakuedzwa kweiyi imba inoburitsa, mutengo wakaderera kana tichienzaniswa nemitengo yevamwe vaparidzi.
Sezvinoonekwa nemamwe mabhatiri atoongororwa neiyo imba yekutsikisa, 'Kutarisirwa uye kushushwae'inopa a vashoma nhamba yevanhu vari muyenzaniso yekuenzanisa: 648 yezera ramakore makumi mapfumbamwe nemashanu !.
Kune chete mana mazera mapoka: 6 - 9 makore, 10 - 18 makore, 19 - 64 makore uye 64 - 96 makore. Sezvinoonekwa, vanhu vanotarisirwa kuve nemhando dzakasiyana dzekuziva mashandiro vakaiswa mukati meumwe neumwe bracket. Kungo kupa muenzaniso, mune bvunzo dzese munhu angatarisira maitiro akafanana kunyangwe uyo ari kuongorora ane makore makumi maviri-ekuberekwa kana ane-pamusoro-makumi matanhatu!
Kuita kunorongedzwa kuita zviyero, zvichiratidza chete yakadzika quartile (25th percentile), median (50th percentile) uye yepamusoro quartile (75th percentile), nokudaro ichitipa isu ruzivo rwakanyanya kwazvo maererano nekuita zvichienzaniswa neyakajairwa.
Iri bhuku iri idiki uye harina kujairika: Mukati hamuna zvinoratidza nezve huchokwadi uye kuvimbika kwemiyedzo inopihwa nebhatiri iri, sezvo pasina kana chidzidzo chekutsigira kugona kwedzidzo inotsanangurwa mune ino software.
Kudzidziswa kwakafanana nemiedzo.
Tichifunga kushomeka kukuru mukuyera kuita kwekutarisa, 'Kutarisirwa uye kushushwaeinomiririra chishandiso chekusahadzika kliniki basa. Zvakangodaro zvinogona kubatsira kuongorora mashandiro kubva padanho rekuona, zvichipiwa huwandu hwakawanda hweyedzo irimo mubhatiri. Panguva imwecheteyo inogona kushandiswa kutora mamwe mazano mumunda wekuvandudza uye nekusimbisa izvo zvinoteerera.
BIA - YeItaly Bhatiri yeADHD. Iko kuongorora: simba uye kushaya simba
Computerized kudzoreredza uye Executive mabasa mushure mekutora kukuvara kwehuropi
Attenzione, kutarisisa uye kushushikana, ubindikiti, kutarisisa bvunzo, kudzidziswa kutarisisa, kutarisisa kuongorora
Kuchenjerera uye kuisa pfungwa - Kuongorora2017-10-032020-10-26http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/10/attenzione-e-concentrazione.jpg200px200px
Yekutarisira kusanzuka uye aphasia: hukama hupi?
Aphasia uye yakachengetedza kutarisa kukanganiswa
VALS (De Cagno, Gaspary neMantione) - OngororoReviews
Ongorora: LEPI: Muedzo wekuongororwa kwehunyanzvi hwe morphosyntactic hunyanzvi hunhu muchikoro chechikoroMabhuku uye Ongororo, Ongororo